‘आरआरमा नेतागिरी गर्ने दाजुहरू कोहीभन्दा कोही कम छैनन्’ – Karnalisandesh
‘आरआरमा नेतागिरी गर्ने दाजुहरू कोहीभन्दा कोही कम छैनन्’
प्रकाशित मितिः १४ कार्तिक २०७६, बिहीबार ०२:४५ October 31, 2019
काठमाडौँ। गत मंगलबार बिहान ७ बजे बलात्कारको आरोपमा आरआर क्याम्पस स्ववियु सहसचिव इन्द्रहाङ राई पक्राउ परे। अखिलका पूर्व केन्दीय सदस्यसमेत रहेका राईमाथि १८ वर्षीय युवतीलाई देउसी खेल्न बोलाएर बलात्कार गरेको आरोप छ। महानगरीय प्रहरी वृत्त बौद्धबाट खटिएको टोलीले राईलाई दक्षिणढोका माकलबारीबाट मंगलबार बिहान साढे ७ बजे पक्राउ गरेको थियो।
राई प्रकरणलाई लिएर आरआर क्याम्पसकी पूर्व विद्यार्थी एवं पत्रकार निर्मला घिमिरेले घुमाउरो भाषामा अन्य नेताहरूको व्यवहार पनि कम नभएको बताएकी छन्। ‘देउसी खेल्न बोलाएर बलात्कार’ शिर्षकको समाचारलाई सामाजिक सञ्जालमा सेयर गरेर पत्रकार घिमिरेले लेखेकी छन्,‘आरआरमा नेतागिरी गर्ने दाजुहरू कोहीभन्दा कोही कम छैनन्।’
पत्रकार घिमिरेको स्टाटसले धेरै कुरा बोल्छ। आरआरमा राजनीति गर्ने नेताहरू स्त्रीलम्पट छन्। साथै उनीहरू सहयोग र भरोसाका नाममा युवतीलाई प्रयोग गर्छन्। आरआरमै पढ्ने अर्की एकजना युवती आफ्नो नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा कर्णाली सन्देशसँगको कुराकानीमा भनिन्, ‘भर्ना गर्न जाँदा यता जाउ, उता जाउ भन्दै सहयोग पनि गर्छन्। तर, पछि आएर गलत मनसायले फोन गर्ने, भेट्न बोलाउने गर्छन्। रातीराती फोन गर्छन्।’
पत्रका घिमिरेका अनुसार आरआर क्याम्पस मात्रै नभएर अधिकांश क्याम्पसमा महिला विद्यार्थीले विभिन्न खालका हिंसाको सामना गर्नु परिरहेको छ। उनी भन्छिन्, ‘आरआर क्याम्पसका बारेमा म राम्रोसँग परिचित छु। नामै लिएर भन्नुपर्दा पनि भन्न सक्छु। कुन मानिसले के नियतले फोन गर्छ? कुन हिसाबले सम्पर्क बढाउछ ? हामीलाई थाह त हुन्छ नि।’
पछिल्लो समयमा बलात्कारका थुप्रै घटनाहरू सार्वजिनक भइरहेका छन्। प्रहरीले हिजो मात्रै सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को युवा संघ र कांग्रेसको विद्यार्थी संगठनका एकएकजना नेतालाई बलात्कार आरोपमा पक्राउ गरेको थियो।
पक्राउ पर्नेमा दाङका सन्देश शर्मा पोखरेल र नुवाकोटका ज्ञानेन्द्र गजुरेल छन्। ललितपुर प्रहरीका डीएसपी सन्तोष तामाङका अनुसार पोखरेलले आफू पूर्वएमालेको युवा संघको उद्योग तथा समृद्धि विभागको सदस्य भएको बताएका छन् भने गजुरेलले नेविसंघको पूर्वकेन्द्रीय सदस्य र हाल कांग्रेस नुवाकोट जिल्ला सदस्य भएको बयान दिएका छन्। उनीहरुले अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका छन्।
दुवै जनाले मिलेर २९ असोजमा ललितपुरमा १९ वर्षीय युवतीमाथि बलात्कार गरेको अभियोग छ। जिल्ला अदालत, ललितपुरबाट जबरजस्ती करणी मुद्दामा म्याद थप गरेर अनुसन्धान भइरहेको तामाङले जानकारी दिएका छन्।